LIVE STREAMING Web Halgan TV Station
London:-Waxaan ugu bishaareynaynaa dhamaan umada Soomaaliyeed iyo Akhristayaasha Halgan.net in
Nadwo Cilmiyeed ay bilaaban doonto markay bishu tahay 5-7 2016 waxaana ay ka bilaaban doontaa Masjidka Abuubakar Ee Degmada Buurtinle.
Nadwadan ayaa waxaa si maqal iyo muuqaal ah u tabin doona Shabakarada Islaamiga ee Halgan.net hadii alle idmo
Halgan.net ayaa waxaa uga barateen in ay duruusta iyo nadawaadka diiniga ah ay si maqal iyo muuqaal ah idiinku soo gudbiso.Howlwadeenada Halgan.net ayaa haatan Diyaariyey in si maqal iyo muuqaal ah aad uga bogotaan Nadwo Cilmiyeed ay bilaaban doonto markay bishu tahay 5-7 2016 waxaana ay ka bilaaban doontaa Masjidka Abuubakar Ee Degmada Buurtinle.
Sidoo kale waxaad si Live ah uga dhageysan kartaa Radio Halgan Live adiga oo telkaaga ku soo dajisan kara App-ka Radio Halgan Live. iyo Radio Al-Xikma oo ka howlgala deegaanada Puntland.
Nadwadan ayaa waxaa ka soo qeyb gali doona culumo si weyn looga yaqaan Soomaaliya waxaana ay si rasmi ah u bilaaban doontaa hadii alle idmo 28-30 Rajab 1437 ku beegan 5-7-May 2016.
Idaacada Islaamiga ee Al-Xikma ay xarumo gaaraya 13 ku leedahay Puntland waxayna baahisaa duruusta Diini ah iyo adeega bulshada. Waxaa kale oo aad si sahlan ugu shuban karaan Radio Halgan Live telkooda gacanta Radio Halgan Live Google Play hadii uu yahay telfanka aad heysato nooca Android hadii aad heysato Apple waxaad ka soo gishataa App Store .waxaad ku qoreysaa (Radio Halgan Live) waa free wax lacag ah maaha . Halkan ka Dajiso Radio Halgan Google Play Halkan ka Dajiso Radio Halgan Live App Store Waxaa kale oo aad duruusta iyo towjiihaadka culumada aad si dhib yar aad uga dhageysan kartaa Radio TuneIn oo aad soo gishan karto telfankaaga gacanta.Radio TuneIn ka dib meesha ay ku taal Search ku qor Radio Halgan Live . Alle waxaan ka baryeynaa in acmaasheen uu ka dhigo mid kaligiisa khaalis u ah Aaaamiin Hoos ka Dhagayso si live ah Radio Halgan iyo Idaacadda Radio Al-xikma
Halkan Ka Dhageyso Radio Halgan Live. Mareegta Radio Halgan halkan ka eeg Maamulka Radio Halgan Live Dhamaan waxaan u mahad celineynaa walaalaha nagu kordhiyey talooyinka iyo nasiixooyinka qiima galka ah oo ay na soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah culumada Soomaaliyeed alaha dhowree dhamaantoood.
Hajj and Umrah qiimo ku raali geliya 2016 Hajj Package Salama
Shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Somalia
Somali Links Fatwa Online Copyright © 2003 - 2016 Halgan.net ®All rights reserved. Designed by Ramaas Software